musha / Interior design / Chii chinonzi Liquid Marble?
2021 / 05 / 30 kupatsanuraInterior design 7926 0
Iko kunofungidzirwa here kuti iyo yepamusoro mufananidzo chidimbu chemvura chimiro? Zvakaipa, ichi chidimbu chemarble.
Kune akasiyana matombo ekugadzirisa matombo. Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, kugadzirisa kwezvigadzirwa zvemhizha. Yakaputsa kuburikidza nemafungiro edu ekuzvarwa.
Marble seimwe yeakaomesesa zvinhu. Iyo inozivikanwa zvakanyanya mumusika wezvinhu zvekuvaka, uye iwe haugone kufungidzira kuti rimwe zuva. Iyo yakaoma marble inogona kuve yakapfava uye ine rudo. Semuenzaniso, inotevera mufananidzo.
Ehe, iwe unoverenga chaizvo. Iyi ndiyo mhedzisiro yemarble yakaitwa yemvura pamusoro. Marble akadaro akasarudzika, anovhenekera chaizvo maziso evanhu. Iyi ndiyo marble emvura. Nhasi tinonzwisisa chinonzi marble emvura kubva pane mana anotevera maficha.
01 Chii chinonzi marble emvura
02 Iyo maitiro ekuita emvura machena
03.Kuvakwa uye kuiswa kwemarble marble
04.Mashoko akasiyana emvura machena
Chii chinonzi marble emvura
Liquid marble ndiro rakaoma dombo rechisikirwo kuburikidza neakaenzana sawing, CNC yekuveza, ruoko kupukuta, kuitira kuti igadzire inoonekwa liquefaction nyika.
Chigadzirwa chigadzirwa chinogadziriswa zvinoenderana nesaiti saiti. Ukobvu hwayo hunogona kunge huri 20/30 / 50mm, uye huremu hwe20mm i55kg / ㎡.
Surface kurapwa: yakabwinyiswa / matte
Zvakajairika kunyorera: hunyanzvi hwekushongedza, zvigadzirwa zvemumba, madziro uye pasi, nezvimwe.
Performance maitiro emvura machena
- Iko kusanganiswa kwetambo yekucheka uye CNC kuveza nemumwe kunogona kugadzira 3D matombo ekuita.
- Masikirwo akajeka uye chaiwo ane zvakadzika zvakasiyana uye zvido zvinogona kuvezwa padombo pamusoro.
- Pamwe pamwe neyakagadzirwa zvakanaka polishing, icharatidza chimiro chechisikigo.
- Mukuratidzira kwechiedza nemumvuri zvinosimbisa hukuru hwakakwana, zvichigadzira hunyanzvi hwemhepo.
MuFrance, mutambi werudo, Mathieu Lehanneur, uyo anoda gungwa rebhuruu, akashanyira makungwa makumi mashanu munyika, makuru nediki. Runako rwakavanzika rweiyi misiyano isinganzwisisike muvara rwakamupa kurudziro yebasa rake.
Mugadziri anoshandisa machena kuratidza gungwa rebhuruu mupfungwa dzake. Kubva pakuisa zvigadzirwa zvehunyanzvi kusvika padanho rakakura dhizaini yekugadzira, iye anoshandisa yakasarudzika hunyanzvi hweamarble kugadzira zvinoshamisa zvemifananidzo.
Iye anomiririra zvakanyanya emabasa ake i "Liquid Marble" akateedzana, umo Mathieu anoedza kupinza chinguva chemvura ine simba nezvinhu zvakaoma. Mvura, kupenya uye kuyerera kwemvura yegungwa zvinoratidzwa zvakajeka, zvichigadzira chinoshamisa chinoonekwa chiitiko!
Semuenzaniso, inotevera yekuisa art inonzi "Loire Rwizi". Chivanze cheakare castle chakavezwa nematombo akanaka uye dziva remvura yebhuruu rinoonekwa. Kuonekwa kwemvura inopindirana uye mwenje pasi pechiedza chezuva kunoita kuti iwe utende kuti yakagadzirwa neyegirini monolithic marble kubva kuGuatemala.
Icho chaifanira kunge chiri rwizi runomhanya chakaumbwa sechidimbu. Chidimbu chisingagumi chemuLoire mudiki unoyambuka pamusoro pebindu uye uchipinda mukati mevhu kuvhenekesa zvinoreva tsime rerwizi. Zvinoita kuti umire munzira dzako.
Iye anoshandisa yakaoma 3D softwares kuenzanisa mafungu anoramba achifamba egungwa achipepereswa nemhepo, obva ashandisa kuveza kwemakona, obva amboita polishing kuunza iyo nzvimbo kune inopenya uye yechokwadi yekuona. Izvi zvinobvumira muoni kufamba pakati pehurongwa hwekugadzira dhizaini uye nehunhu hwekuona.
Kuiswa kwakadai kwerudo kwakawanawo nzira yavo kupinda muMusée des Arts Décoratifs muParis. Iyo yekumisikidza ingangoita 4 metres pakureba uye 1.7 metres yakafara. Iwo madziro uye pasi peiyo yakapamhama gallery inoratidza nzvimbo yakajeka muvara, zvichisiyana nerima dema dema-senge kuisirwa.
Iyo yekumisikidza inopa mufananidzo wepasirese wegungwa, uchinyatsoteedzera chimiro chemvura inotubuka inogadzirwa nemhepo nyoro.
Nheyo yekumisikidza inokwana 30 cm chete. Kunyangwe uchitarisa pasi kubva kumusoro kana kumusoro padyo, iyo yekumisikidza iri kurova uye kufunga-inomutsa.
Kuvaka uye kuiswa kwemarble marble
a. Nzvimbo dzekuvaka
▼ Linear sawing kuti igadzire iyo prototype
▼ CNC kuveza kuveza iyo misoro nemipata
Ruoko makorari kwekupedzisira kukwana
▼ Kiyi yekuvaka: mafungu echisikigo uye nenhongonya dzakatwasuka
b. Kuisirwa maitiro
Zvakafanana neyakajairika marble mabwe madziro uye pasi yekumisikidza nzira yekuvaka (nyoro nyoro kana yakaoma yakaoma.
Wet namatidza muitiro: huswa-midzi kuenzanisa → pukuta zvakasanganiswa dura (simende dhaka) → dombo paving → ruzivo kurapwa → kupera.
Yakaomeswa yakaturika maitiro: rusvingo kuiswa = pre-mutsara webwe → kutamba kuwedzera mabhaudhi → kuisirwa kwesimbi mafupa, kugadzirisa → dombo rakagadziriswa → dziviriro yeglue → yakakwana
Yekuvaka Ziva: Kuisirwa mushure mekunge chigadzirwa chasvika panzvimbo iyi, uchishandisa iyo dense nzira yekugadzira, inogona kukonzerwa kana kwete.
▼ Nzvimbo yekuvaka yekumisikidza hunyanzvi Loire Rwizi
▼ Nzvimbo yekuvaka yemvura yemabhura fenicha
Nzira dzakasiyana dzekuratidzwa kwemvura marble
Iyi hunyanzvi mhedzisiro yemarble marble inosanganisa iyo nyowani-zera 3D yakasarudzika mhedzisiro software, muchina kuveza uye chinyakare ruoko kupora, kushatisa kukamurwa pakati pekugadzira neunyanzvi.
Mukuwedzera kune kuiswa kwehunyanzvi, kushandiswa kweaya matombo emvura mune zvigadzirwa fenicha uye nzvimbo dzemukati dzinogona zvakare kuratidza yakanaka uye yakasikwa hunyanzvi mamiriro.
Vagadziri kuburikidza neiyo marble pachayo pateni, pamwe neruzivo rwekugadzirisa. Rega chidimbu chemarble ichi, iro raingova dombo rakareruka, kuti rishanduke rive gungwa rinopenya.
Pakapfuura :: Chii Chinonzi Magnetic Suction Lamp? Zvadaro: 170㎡ Solo Kumba MuBeijing, A Mechanical Aesthetic Imba YeMota Midhiya Vanhu